Shariif Sheekh Axmed oo fariin culus u diray madaxda dowladda Soomaaliya. | XAL DOON
Home NEWS Shariif Sheekh Axmed oo fariin culus u diray madaxda dowladda Soomaaliya.
Shariif Sheekh Axmed oo fariin culus u diray madaxda dowladda Soomaaliya.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa markii u horeysay ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda deegaano kamid ah maamulada Jubaland iyo Koofur Galbeed.
Mr. Shariif oo haatan madax u ah madal ay ku mideysan yihiin inta badan Xisbiyada mucaaradka ah ayaa soo jeediyay in si shuruud la’aan ah lagu joojiyo dagaalada dhiiga badan uu ku daatay ee ka socda Wanllaweyn iyo dhuleedka magaalada Kismaayo.
“Walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamay deegaanada ka kala tirsan Maamulada jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqayaa inay colaadda shuruud la’aan ku joojiyaan, wax kaste oo tabasha ahna wada hadal iyo is qancin lagu dhameeyo.” Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Somaliya.
Waxa uu dhinaca kale madaxda sare ee dalka ka dalbaday iney kaalin muuqata ka ciyaaraan joojinta dagaalada oo meeshii ugu xumeyd gaaray, maadaama meelaha qaar meydadka lagu gubayo.